Malaysia Um Chin Refugee Caah Thawngpang Tha Ngaingai Theih A si. Kan In Lawmhpi Hna. – Onlinenungak
Malaysia Um Chin Refugee Caah Thawngpang Tha Ngaingai Theih A si. Kan In Lawmhpi Hna.
By chin tawi on December 15, 2020
Mr. Thomas မှ UNHCR ရုံးကိုနောက်လ ဇန်နဝါရီလ (သို့) MCO များပြီးဆုံးချိန်တွင်စတင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဟုယုံကြည် ပါသည်။ ပြီးနောက် ယခုအချိန်တွင်ရုံးအတွင်းပေါ်လစီနှင့်သွားလာပုံများလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြု ပင်နေပါ သည်။ လူသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကဒ်၊စာရွက်သက်တမ်းတိုးခြင်းများလည်းအချိန်ကုန်ပြီးစောင့်ဆိုင်းရန်မလို တော့ဘဲ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိ့ုအပြင် UNHCR အနေဖြင့်လည်းအဖွဲ့စည်း အသီးသီးကို လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးလက်တွဲဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါသည်။ နောက်ထပ်လည်း Johor မှာဖွင့်ထားသလိုမျိုး မလေးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်သလို UN ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်သွားရန်လည်းစီစဉ်နေကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
လောလောဆယ်တွင် လူဦးရေ ၃၆၀၀၀ လောက်ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း MCO နှင့် CMCO များကြောင့်ပြန်လည်နှောင့်နှေးနေရပြီးရုံးလည်းပိတ်ထားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသောသူများ၏စာရင်းများကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးအစဉ်လိုက်ဖြင့်သာခေါ်ဆိုနေပါသည်။ထို့ကြောင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းမှဖုန်း update လုပ်ပြီးစာရင်းပေးရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
သို့သော်လှုပ်ရှားသွားလာမှုပိတ်ပင်ခြင်းများ ပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် ရုံးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ယောက်မကျန်ခေါ်ဆိုမည်ဟုကတိပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခသည်နှင့် ယာယီခိုလုံသူများအနေဖြင့် Registration Helpline: 017 614 3810
08AM – 4PM (Monday – Friday) ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသောအခြေနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ UNHCR လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် လဝကအရာရှိများကိုလည်းတွေ့ဆုံးပြီး UN ကဒ်နှင့် စာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကိုမဖမ်းဆီးကြရန်တောင်းဆိုနေပြီး မကြာခင်တွင်သဘောတူညီမှုရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
အစိုးရ၏ပြောဆိုချက်အရUN ကဒ်နှင့်စာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကိုနေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ဟုဆိုပါသည်။ အဖမ်းဆီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့သော Hotline ဖုန်းသည်နေ့စဉ်ဖုန်းအဝင်များပြားခြင်းများ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် အွန်လိုင်းဖောင်မှသတင်းပေးပို့ကြရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။၄င်းဖုန်းကို ခေါ်ဆိုသူများတွင်တစ်ချို့ သည်အဖမ်းဆီးနှင့်မသက်ဆိုင်သောကိစ္စများအတွက်ခေါ်ဆိုတတ်ကြသည်။ထို့ကြောင့် မိမိလူများအနေဖြင့်လည်းမည်သည့်ကိစ္စအတွက်မည်သည့်ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုရမည်ကိုနားလည်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်။
USA နိုင်ငံမှမလေးရှားရှိဒုက္ခသည်များမည်မျှယူမည်ဆိုသောသတ်မှတ်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီး လက်ရှိတွင် Canada နိုင်ငံကမှ လာမည့်သုံးနှစ်အတွက် ဒုက္ခသည် ၁.၂ သန်းလောက်ခေါ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Australia နိုင်ငံကလည်း လာမည့်နှစ်တွင် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၃၀၇၀၀ လောက်ကိုခေါ်ယူရန်ဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်မည်မျှကိုခေါ်ယူကြမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည် ဟု UNHCR မှယနေ့အစည်းဝေးတွင်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ UNHCR နှင့်ဒုက္ခသည်အဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်များအစည်းဝေး
Mr. Thomas မှ UNHCR ရုံးကိုနောက်လ ဇန်နဝါရီလ (သို့) MCO များပြီးဆုံးချိန်တွင်စတင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဟုယုံကြည် ပါသည်။ ပြီးနောက် ယခုအချိန်တွင်ရုံးအတွင်းပေါ်လစီနှင့်သွားလာပုံများလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြုြ ပင်နေပါ သည်။ လူသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကဒ်၊စာရွက်သက်တမ်းတိုးခြင်းများလည်းအချိန်ကုန်ပြီးစောင့်ဆိုင်းရန်မလို တော့ဘဲ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် UNHCR အနေဖြင့်လည်းအဖွဲ့စည်း အသီးသီးကို လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးလက်တွဲဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါသည်။ နောက်ထပ်လည်း Johor မှာဖွင့်ထားသလိုမျိုး မလေးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်သလို UN ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်သွားရန်လည်းစီစဉ်နေကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
လောလောဆယ်တွင် လူဦးရေ ၃၆၀၀၀ လောက်ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း MCO နှင့် CMCO များကြောင့်ပြန်လည်နှောင့်နှေးနေရပြီးရုံးလည်းပိတ်ထားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသောသူများ၏စာရင်းများကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးအစဉ်လိုက်ဖြင့်သာခေါ်ဆိုနေပါသည်။ထို့ကြောင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းမှဖုန်း update လုပ်ပြီးစာရင်းပေးရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
သို့သော်လှုပ်ရှားသွားလာမှုပိတ်ပင်ခြင်းများ ပြီးဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် ရုံးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ယောက်မကျန်ခေါ်ဆိုမည်ဟုကတိပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခသည်နှင့် ယာယီခိုလုံသူများအနေဖြင့် Registration Helpline: 017 614 3810
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသောအခြေနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ UNHCR လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် လဝကအရာရှိများကိုလည်းတွေ့ဆုံးပြီး UN ကဒ်နှင့် စာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကိုမဖမ်းဆီးကြရန်တောင်းဆိုနေပြီး မကြာခင်တွင်သဘောတူညီမှုရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
အစိုးရ၏ပြောဆိုချက်အရUN ကဒ်နှင့်စာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကိုနေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ဟုဆိုပါသည်။ အဖမ်းဆီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့သော Hotline ဖုန်းသည်နေ့စဉ်ဖုန်းအဝင်များပြားခြင်းများ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျှင် အွန်လိုင်းဖောင်မှသတင်းပေးပို့ကြရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။၄င်းဖုန်းကို ခေါ်ဆိုသူများတွင်တစ်ချို့ သည်အဖမ်းဆီးနှင့်မသက်ဆိုင်သောကိစ္စများအတွက်ခေါ်ဆိုတတ်ကြသည်။ထို့ကြောင့် မိမိလူများအနေဖြင့်လည်းမည်သည့်ကိစ္စအတွက်မည်သည့်ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုရမည်ကိုနားလည်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်။
USA နိုင်ငံမှမလေးရှားရှိဒုက္ခသည်များမည်မျှယူမည်ဆိုသောသတ်မှတ်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီး လက်ရှိတွင် Canada နိုင်ငံကမှ လာမည့်သုံးနှစ်အတွက် ဒုက္ခသည် ၁.၂ သန်းလောက်ခေါ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Australia နိုင်ငံကလည်း လာမည့်နှစ်တွင် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၃၀၇၀၀ လောက်ကိုခေါ်ယူရန်ဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်မည်မျှကိုခေါ်ယူကြမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည် ဟု UNHCR မှယနေ့အစည်းဝေးတွင်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။